Koox hubeysan oo baxsatay kadib Saddex qof oo Muqdisho ay ku dileen -News and information about Somalia
Home Warkii Koox hubeysan oo baxsatay kadib Saddex qof oo Muqdisho ay ku...
Koox hubeysan oo baxsatay kadib Saddex qof oo Muqdisho ay ku dileen
Koox hubeysan ayaa xalay waxaa ay sedex qof ku dileen degmada Waabari ee gobolka Banaadir.
Dilka ayaa waxaa uu sigaar ah uga dhacay nawaaaxiga Baar ha i dhaafin, oo ka tirsan degmada Waabari ee gobolka Banaadir.
Ragga dilka loo geystay ayaa la sheegay in ay wateen Mootada yaqaano Fekon, iyagoona durbadiiba goobta ka baxsaday, sida ay sheegeen dadka deegaanka.
Wararka ayaa intaasi waxaa ay ku darayaan in sedexda qof ee la dilay ay ahaayeen shacabka, halka wararka kale ay sheegayaan in ay ahaayeen askar ka tirsan dowladda Soomaaliya.
Ciidamada amaanka ayaa xalay baaritaano ka sameeyay goobta uu dilka ka dhacay.
Ma jiraan weli wax war ah oo ka soo baxay saraakiisha laamaha amaanka ee dowladda Soomaaliya.
Previous articleSheekh Shariif oo Bilaabay Qorshe Culus Damacsan & Safarkiisa Dalka….
Next articleKoofur galbeed oo lagu eedeeyay in ay si qaldan u wadaan maamul u sameynta Ceel barde
XOG: Madaxweyne Deni Oo Lala Fur Furay Xildhibaanadii Mooshinka Ka Diyaarinayay